Afrika Mainty · Jolay, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Jolay, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Jolay, 2011
Sodàna Atsimo 26 Jolay 2011
Kenyà 22 Jolay 2011
Sodàna 22 Jolay 2011
Sao Tome sy Principe 21 Jolay 2011
Togo 17 Jolay 2011
Zambia 11 Jolay 2011
Eoropa Andrefana 10 Jolay 2011
Zambia: Ahoana no hahatsiarovana an'i Chiluba?
Zambia 09 Jolay 2011
Ahoana no hahatsiarovana an'i Chiluba? Izany no fanontaniana iadian'ireo mponina Zambiana amin'ny aterineto hevitra ao amina tambanjotra maro samihafa. Saika hita taratra eny amin'ny fitenin'ny Zambiana tsirairay ny resa-mandeha mikasika ny fahafatesan'ny filoha teo aloha sy ny fahamarinany izay manambara fa ny andro iray hahafatesan'ny elefanta dia izay no resaka ao an-tanàna.
Mozambika 06 Jolay 2011
Malawi 04 Jolay 2011
Nanoratra lahatsoratra tena nahaliana isan-karazana miainga avy amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety, hatramin'ny fitandroana ny rano, ny baolina kitra Malaoita sy ny fanambadian'ny olo-malaza ara-politika iray, i Victor Kaonga nandritra izay efa-taona naha-tao anatin'ny Global Voices azy izay. Nanomboka tamin'ny NDAGHA ny bilaoginy tamin'ny 2006